Somaliland: Xulafadu hana weydiistaano Berbera – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Somaliland: Xulafadu hana weydiistaano Berbera
A warsame 8 April 2015
Mareeg.com: Maamulka Somaliland ayaa maanta shaaciyey in xulafada uu Sacuudigu hogaaminayo aysan adeegsan karin dekedaha iyp garoomada maamulkaas ilaa ay kasoo idan weystaan xukuumadda Somaliland, sida hadalka loo dhigay.
Wasiirka duulista hawadda Somalia, Maxamuud Xaashi Cabdi, ayaa sheegay in aanay u ogolaanayn Isbaheysiga Sacuudigu hogaaminayo iney Xuutiyiinta Yemen la weeraraan dekedaha iyo garoomada Somaliland inta maamulkaas laga idan weydiisanayo.
“Xulafada Sucuudigu hogaaminayo ee la dadaallamaya Xuuthiyiinta ma isticimaali karaan Hawada, Badda, iyo Garoomada Qaranka Somaliland ilaa ogolaasho rasmi ah soo waydiistaan Xukuumadda Somaliland”, ayuu Wasiirka duulista Maxamuud Xaashi Cabdi.
Wasiirka wuxuu mar kale yiri “Waxaan uga digaynaa xulafada iney iscimaalaan garoomada iyo dekedaheena, fariin cod dheerna waxaanu leenahay wixii cawaaqib xumo ka timaada arintaasi hadii ay dhacdo iyagaa ka masuul ah” ayuu sidoo kale yiri wasiirka oo shir jar’aaid qabtay.
Wasiirka ayaa u muuqday inuu ka xumaa ogolaasho la sheegay in dowladda Soomaaliya bixisay oo la rabo in xulafadu ku adeegsadaan dekedaha iyo garoomada Boosaaso iyo Berbera.
“Dawladda Soomaaliya wixii ay hayso ee ay maamusho ciday doonto ha ku marti soorto, wax aanay haynin ninka yiraa cid baan ku marti soorayaa, dee maha aragti sax ah” ayuu yiri Maxamuud Xaashi Cabdi.
“Garoomada Somaliland hawadeedda, badeeda iyo dhulkeedda in lagaga duulo kooxaha xuutiyiinta ee Yemen ogolaanshaheedda dawladda Muqdihso ma bixin karto” ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
Maamulka Somaliland ayaan diidaneyn duulaanka lagu hayo Xuuthiyiinta Yemen, hase ahaatee wuxuu ka xumaaday war dhawaan uu warbaahinta siiyey wasiirka arrimaha debadda Soomaaliya, C/salaam Hadliye Cumar.
Wasriika ayaa warkaas ku sheegay in Soomaaliya isbaheysiga u fasaxday iney dullaanka ka dhanka ah Xuuthiyiinta u adeegsadaan baddeda iyo barrigeeda.
Liiska Xawaaladaha iyo shakhsiyaadka Kenya xayirtay